Cookies Haasisina Kukoshesa Mari: Sei Kuzivikanwa uye Kugadziriswa kuri Kuchinja muPost-Cookie Nyika | Martech Zone
Kana isu tikapinda muUber app yedu, zvinobva zvango dhonza kumusoro kwedu kwazvino nzvimbo. Patinoshanyira webhusaiti yezvipfeko, tinoona zvakataurwa zvinhu zvakatorwa pane zvatakatenga kare. Kana isu tichitarisa pamisasa magiya pamhepo, tinokurumidza kupihwa inoenderana nemabhanhire kushambadzira kune izvo zvinotengeswa Kana isu tavhura Google kana Apple Mamepu, tinopihwa zvinowanzo shanyirwa nzvimbo zvinoenderana nenguva nenzvimbo iripo. Izvo zvese ndezvekushandurwa uye zvese zvinhu zvinodzikira kuchinhu chimwe - kuzivikanwa kwedu.
Kwemakore, iyo chete nzira vatengesi vedigital vaigona kuwana mukana kune urwu ruzivo yaive browser makuki. Pakutanga, makuki aya aisatarirwa kuti ashandiswe seyakachengetedzeka kuzivikanwa kwemunhu asi kuti arangarire zvavanofarira. Asi, nekufamba kwenguva, makuki akakurumidza kuve iwo-ese-magumo-ese ekuzivikanwa kwevashandisi painternet.
Kubviswa kweTatu-Bato maKuki
Nhasi, vatengesi vemadhijitari vachiri kungoomerera pane echitatu-bato makuki kune ese akanangwa kushambadzira - vachiishandisa sechishandiso kuunganidza ruzivo nezvevatengi. Nekudaro, chechitatu-bato makuki anochengetwa nemapato ane vatengi vakaita kwete ipa mvumo yakananga yekuchengeta yavo data - izvo zviri kukonzera kukonzeresa kwakakura sezvo vatengi vanova nekuwedzera kuziva kwavo kuvanzika.
Semagumo, Firefox uye safari vatotora matanho ekuvharira chechitatu-bato makuki uye mamwe maitiro anozivisa mushandisi pasina mvumo yake. Google Chrome ndiyo yekupedzisira injini yekutsvaga kuti iite zvakafanana, ichizivisa kuti haizobvumidze chechitatu-bato kuki yekutevera mukati memakore maviri anotevera. Neichi chiitiko chazvino kubva kumabhurawuza, vazhinji vari kunetseka kuti kushomeka kwemunhu kuchapa kushambadzira kwedhijitari kushomeka.
Kunze kwekunge isu seindastiri taita chimwe chinhu nezvazvo, tichava nehukuru-hukuru-zvese kushambadzira pasirese pasirese.
Iyo Yakakosha Pivot Dhijitari Vatengesi Vanoda Kugadzira
Indasitiri yekushambadzira yedhijitari ingadzivise sei kukwira uku mukuwanda? Mazhinji marandi atendeukira kune zvakanangana nekutarisisa - kuvimba nezvakadai senge mamiriro ekunze kana peji peji pane mawebhusaiti kugadzira kunyepedzera kwekuita. Kunyangwe izvi zvichikwanisa kuita kuti kushambadzira kwavo kuve kwakaringana kune vatengi, panofanirwa kuve neimwe nzira yekumisikidza nekuchengetedza hunhu nenzira yakavanzika-inoenderana.
Kunyangwe ivo vava kuwedzera kuziva kwavo kuvanzika, vatengi vachiri kuda kusangana nemabhurandi kuburikidza neayo akakodzera, kutaurirana akasarudzika. Mushure mezvose, "personalization" yakabuda seye 2019 izwi regore maererano neChitubu cheNational Advertisers 'ongororo yevatengesi venyika vakakurumbira.
Vatengesi Vanogona Sei Kuenzanisa Iyo Iyo Juxtaposition Pakati peMunhu uye Zvekuvanzika?
Chekutanga-bato domain uye yekutanga-bato kuki-based kuzivikanwa: Nepo zvichangobva kutariswa zvadzikira pane chechitatu-bato makuki, haazi ese makuki anofanirwa kutorwa inedible. Chekutanga-bato makuki anogona kushandiswa neyakagadzirwa kuchengetedza mushandisi dhata kuitira kuti iwe ugadzire kushambadza kana zvemukati zvinoenderana nemvumo yevatengi Iyi nzira yekuunganidza data haidi kuti mutengi azvizivise kuburikidza neruzivo rwega ruzivo; asi, iyo inopa isingazivikanwe ID kuti igadzire yakashambadzirwa kushambadza uye zvemukati.
Mushandisi wekupinda-kwakavakirwa chiziviso: Kuburikidza nezano rakaonekwa se "kushambadzira kwevanhu," mabrand anokwanisa kuona vatengi pamadhizaini mazhinji uye chiteshi kuburikidza nemasaiti akasiyana siyana uye mashandisiro avanopinda. Nekuti zvinoda kuti mutengi azvizivise pachezvake, zano iri rinoda kubvumidzwa kwevatengi kuti varambe vachienderana mukugovana kwavo ruzivo uye dhata nevechitatu mapato. Kamwe vatengi pavanopa mvumo yavo, akasiyana mabrands anokwanisa kushandisa icho chidimbu cheruzivo runozivikanwa kuti vatevedze vatengi pamasaiti avakapindamo. Kushambadzira kwevanhu-kunodawo kudyidzana kubva kunhamba zhinji yemasaiti kuitira kuyera.
Chimwe chinhu chakakosha chinobata chokwadi munzira mbiri idzi: simbisa zvakavanzika zvevatengi kuburikidza nemvumo. Chero chero data rakagovaniswa nemutengi rinoda kushandiswa zvakanyanya pachinangwa icho uye rinongofanirwa kugovaniswa nevechitatu mapato nemvumo.
Nemitemo mitsva yekuvanzika se GDPR uye CCPA, vatengi havafanirwe kuzivikanwa uye vakasungirwa kune yavo data kuburikidza neruzivo rwevanhu ruzivo pasina mvumo.
Sezvo zvigadzirwa zvichimanikidzwa kutora zvakavanzika zvevatengi zvakanyanyisa kuburikidza nemirau uye kufambisa kune mabrowser anoteerera kune zvakavanzika, pane kutya kuri kukura pakati pevashambadzi veadhijitari nezve maitiro ekugadzirisa marongero avo kuti vagare akakodzera kune vavanotarisira.
Nekugamuchira iyo nyowani nguva yevatengi kudzoreredza data, mabrandi anogona kushandisa nechivimbo data rakabvumirwa kuti ipe yakawandisa yakasarudzika yevatengi ruzivo pachiyero.
Tags: mamapu eapuroccpakuchengetedza vatengikudzayidco chikuvakudhindwa kweminweFirefoxyekutanga-pati makukikuongororaLoginhapana cookiePersonalizationwechitatu-bato